Cilmibaaris Cusub oo Sheegtay In Jacaylku U Wanaagsan Yahay Caafimaadka Dumarka – AwKutub News
Cilmibaaris Cusub oo Sheegtay In Jacaylku U Wanaagsan Yahay Caafimaadka Dumarka
By awkutubnews January 20, 2019
Leave a Comment on Cilmibaaris Cusub oo Sheegtay In Jacaylku U Wanaagsan Yahay Caafimaadka Dumarka
Daraasad cusub oo dhawaan la sameeyay ayaa xaqiijisay saxnimada weedha oraneysa (jacaylka waa loo bukoodaa), kadib markii ay soo baxday in dumarka ay ku dhacaan isbedello genetic ah oo jirkooda ku yimaadda, waa marka ay jacayl qaadaan.
Cilmi-baarayaal ka tirsan jaamacadda California ee gudaha Los Angeles, ayaa baaritaan ku sameeyay dhiigga 47 gabdhood oo xiriir cusub oo soconaya labo sano bilaabay, waa sida ay qortay jariidada Sundy Times ee ka soo baxda dalka Ingiriiska.
Cilmi-baaryaasha ayaa waxey si gaar ah ula socdeen gentic dumarka jacaylka ka qaaday ee lamaanahooda ku faraxsan, waxey daahrogeen in jacayl ku dhaco naftooda oo kaliya aaney saameyn ku yeelanayn ee jirkooduna uu difaac wanaagsan yeelanayo.
Waxey ka ogaadeen daraasaddoodan cajiibka ah in haweenaydu marka ay jacayl qaaddo uu jirku soo saarayo gene lagu magacaabo Interferon, waana kan mas’uulka ka ah oo soo saara Antivirus jirka ka difaac u ah, waana borotiinka uu jirku soo saaro caado ahaan marka uu viruska iyo cudurrada la dagaallamayo.
Khubaradu waxey si gaar ah ula socdeen heerka isbedelka Interferon-ka iyo hadba heerka uu marayo xiriirka lamaanaha, waxeyna arkeen haweenkii xiriirkooda jacaylka uu xumaaday, in uu hoos u dhacay heerka barootiinka la dagaallama viruska ee jirka dumarka uu soo saaro.
Khubaradan ayaa waxey si cad u sheegeen in kororka Interferon-ka dhanka dumarka xilliga ay jacaylka qaadaan aan weli si dhab ah loo ogeyn, waxeyna soo hindiseen in ay suurtaggal tahay diyaar garowga jirka ee bacraminta inuu yahay halka ay sirtu ku jirto, arrintaas oo ka dhigaysa iney aaminaan in ragga iyo dumarku ay ku kala duwan yihiin dhanka genetic-ga marka ay jacayl ku dhaco.
Saynisyahannadan ayaa daraasadda sameeyay, kadib markii ay soo baxeen warar badan oo dareenka jacaylka la xiriirinaya jirka, sida; isbedelka wadnaha iyo fakarka xooggan.
Tags: Caafimaadka Daraasad Dumarka Haweenka Jacayl Wanaag
Sacuudiga ma ka fileysay tartanka heesaha iyo qoob ka cayaarka?
Qaraxii 14-ka Oktoobar (Isgoyska soobe) ee Muqdisho:- Kaalintee ayuu ka galay Weerarradii Argagixiso ee Dunida ugu waynaa?
Gabay : kuu gabyay
Previous Entry Shir madaxeedka dhaqaalaha Dalalka Carabta oo Beyruut ka furmay
Next Entry Dowladda Itoobiya oo ku dhowaaqday howl-gal ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabab